Cappuccino uye Nhema dzeKutakura | Martech Zone
Vhiki rapfuura ndakamira yeMcSkillet burrito munzira yekuenda kubasa. Ini pamwe ndinogona kunyora posvo pamusoro pekuti ndinovada zvakadii uye neQdoba breakfast burritos, asi ini ndichakurega iwe. Pandaive ndiri McDonalds, kuda kwangu kuwana zvakanakisa kwandiri uye ini ndakaraira iyo McCafe Mocha pane kumira pane yangu chitoro chekofi chaunofarira.
Mavara, akaomesesa zviratidzo uye kurongedza neepasi matoni akakukomberedza uye anoita kuti unzwe sekunge urikukwira kuenda kuEuropea cafe. Iwe hausi, zvakadaro. Ndakanyatsotarisisa munhu aive kuseri kwekaunda achitsimbirira mabhatani ekurudyi, achimhanyisa zvirimo, ndokuvhara chinwiwa nekirimu yekukwapura uye kudonhedza chokoreti.
Ndakasvika pamotokari, ndikatanga kunwa svutugadzike, uye… blech. Handina chokwadi nezvakaitika, ndinotenda pakanga paine kusashanda nemuchina kana chimwe chinhu, asi zvakaravira kunge yakaipa expresso pfuti yakafukidzwa nekwapurwa kirimu. Ini ndinogona padumbu chero kofi (ini ndaive muNavy nekuda kwekunaka), asi ndaifanira kuikanda kunze. Ehezve, timu yavo yaisazoziva kana paive nedambudziko chero - chero zvishoma pane zvavaizoziva yakanaka yepanyika nyuchi. 😉
Tine a Starbucks pazasi kubva kubasa kwangu, saka zvakaoma kuti hofi yekofi ipfuure. Ndiri kunyanya kufarira yavo peppermint manyuchi… sekungoziva kwakaita madzitateguru edu kuti Coca-Cola yaive necocaine, ndinotya kuti rimwe zuva tichazoona kuti Starbucks Peppermint ine chimwe chinhu chisiri pamutemo mukati mayo.
Starbucks ine yakajeka, yakachena logo iyo yaigaro kuudza vanhu vakakukomberedza kuti, "Ndine mari yakawanda zvekuti ndinogona kushandisa $ 4 pane dzimwe bhinzi dzakatsva.”(Dzimwe shamwari dzangu dzinozvidaidza Mabhachi mana). Maiwe, iyo tsika icon iyo yaive Starbucks yatanga kupera. Ini kashoma kurova mitsara mirefu uye ndinogona kupfuudza iyo Starbucks zviri nyore seGesi Chiteshi chine kofi stand. Mukombe uchiri wakanaka uye unosiyanisa, zvakadaro.
Kuruboshwe ndiko, pamwe, kofi yangu yandinofarira yezvose. Shamwari dzangu dzakanaka Jason naChris vanomhanyisa shopu huru yekofi, Mukombe weBean kukona kukona kubva kumba kwangu.
Ikofi inotengeswa kubva kune kofi roaster kubva kuHamilton, Ontario. Yese sip, kunyangwe iri decaffeine, ichiri yakatetepa, yakapfuma uye yakasviba. Zvakaoma kutsanangura musiyano wekuti bhinzi yakagochwa, ivhu, yakatsikwa uye yakanyoroveswa inogona kuburitsa yakasarudzika mvura uye inotapira furo pamusoro. Baristas pa Indianapolis 'yakanakisa shopu yekofi nyatsoyera uye nenguva pfuti yega yega kuona kuti kunaka kwayo kunowedzerwa. Kazhinji, ndinovaona vachirasira uye vodzosera nyemba kudzamara vawana bara chairo - dzimwe nguva hunyoro hunogona kutamba nhamo.
Ivo havadhure zvakaringana seStarbucks uye ivo vari nani zvakanyanya (exponentially zvirinani kupfuura McCoffee), zvakadaro mukombe uri pachena uye chena. Hapana chakakosha… kunze kwezviri mukati. Ndizvo zvandakauya kuzotenga, handizvo here? Ini do bhadhara chiitiko icho chitoro chinofanira kupa, zvakare! Yakawanda nzvimbo, yemahara isina waya, uye zvimwe zvigaro zvakanaka.
Ah, manyepo ekuputira! Handikwanise kufungidzira kuti McDonalds akashandisa marii kuyedza kuita zviri mukapu zvioneke zvirinani kubva kunze kwemukombe.
Tags: jasoni anowayakawanda dura spfyakawanda spf rekodhippc agencykudzokera shurespf kutarisaspf rekodhispf rekodhi yekutarisaTV Series
Ndira 12, 2009 na11: 40 PM
Ini ndinogona kubata nekofi yakaipa zvakare, asi ini ndinonzwa saMotrin Amai. Ini ndinotandara kuStarbucks nekuti ndiyo chete nzvimbo kwandinogona kuenda kuzororo kubva kubasa iro rinodziya uye rine zvigaro zvakanaka munguva yechando. Mitsetse inoyamwa, iyo kofi haina kunaka uye mhepo irikushata nevana vachimhanya-svetuka kunge zvipfuyo zvidiki.
Zvakanaka, zvakazvimirira zvitoro zvekofi zvisingawanzo kutenderedza zvikamu izvi. Asi, ndine mashoma uye ini ndinovadzivirira zvakanyanya. Rarama kwenguva refu mukombe usina kumakwa!
Ndira 12, 2009 na11: 47 PM
Wakatarisa here Indie Kofi Zvitoro? Pamwe pane imwe padhuze kupfuura iwe unofunga!
Jan 13, 2009 pa 8: 51 AM
FYI: KuStarbucks mu Broad Ripple, hombe (venti) kofi inoputa inopfuura $ 2.00. Mutambo weBean Cup uri online unoti zvakafanana i $ 1.55. Ini ndinofunga ngano dzemukombe we $ 4 dzinouya kubva kumisika senge NYC.
Asi, hombe post Doug!
Jan 13, 2009 pa 11: 03 AM
Neniwo, ndakaedza macofi eMcBlech. Iwe hauna kuona kusashanda. Ndinozviziva nekuti ndakavapa mikana mitatu. Imwe inotonhora caramel-flavored latte. Imwe inopisa inopisa. Imwe inopisa mocha. Ndakashamisika nekuipa kwavo. Kana ndikatambira kofi yakaipa pane imwe shopu yekofi, ndaidzosera ndovaudza kuti vaedze zvekare.
Ndingazoshamisika kwazvo kana paine munhu aimbonwa kofi-shopu kofi angachinja. Mhinduro yangu: Ndakatenga mhando yakanaka, asi ichiri isingadhuri muchina weespresso. Chinhu icho chingangozvibhadharira icho mumwedzi kana maviri. Iye zvino ndinozviitira zvangu chaizvo madiro andinovaita iwo nechidimbu chemutengo. Iwe unoziva zvavanotaura nezvenguruve mune rokwe.
Ndira 13, 2009 na2: 04 PM
Ini ndakuwana iwe nekuda kwe @ swoodruff's mashanu muMangwanani.
Ini handisi munwi wekofi asi ini ndinonwa tii uye kune dzimwe nzvimbo dzine “tii” muzita ravo asi dzichinhuwa tii.
Ndiri kuda kuziva, haunzwe kuti chikanganiso chekushambadzira kusave ne logo pane kapu yako yekofi?
Ngatitii munhu X ari kuda kafi, vanopfuudza munhu Y akabata kapu yekofi. Munhu X anobvunza kuti Munhu Y akawana kupi kofi. Pamwe Munhu X akashata pakupa madhairekisheni, pamwe Munhu Y haana pfungwa yekutungamira, pamwe Munhu Y haataure Chirungu zvakanaka, saka Munhu Y ari kunetseka kuwana shopu yekofi. Kana iyo isina chinhu kofi yekapu yaive iine logo Munhu Y vaizoziva zvekutarisa.
Ngatitorei muenzaniso kune waini. Ini ndinorangarira mazita ehumwe waini asi kwete ese. Pandinoenda kunotenga waini, ini ndiri pamaonero ezvinyorwa zvinozivikanwa.
Ini ndinotenda marogo akakosha uye iko kukanganisa kusaisa chigadzirwa chako neako logo.
Ndira 13, 2009 na8: 30 PM
Kuve shamwari dzeMukombe weBean, ndine chokwadi chekuti havana logo nekuda kwemutengo wemikombe. Ivo vangatoda kushandisa iyo mari pane bhinzi huru uye ini ndinotenda nezvazvo!
Kutenda kuna Steve nekutaura uye ndinovimba unodzoka nekukurumidza!
Jan 14, 2009 pa 12: 00 AM
Iripi kapu yeBean yaunotaura nezvayo? 😉
Ndira 14, 2009 na11: 44 PM
Inonakidza kwazvo posvo. Zvakare kuve fan of yako yaunofarira kofi shopu kunoita kuti itonyanya kunakidza futi. Ini ndinobvuma, ndinofunga kuti logo ingangobatsira Mukombe weBean, asi ndinofungawo kuti pamwe haina kukoshesa mutengo wekuzviita. Mumuenzaniso uri pamusoro, ndinofunga Munhu Y aizoita zviri nyore uye nekukurumidza kuti Munhu X azive kwavakawana mukombe mukuru wekofi uye chaizvo nzira yekusvikako. Ndinozvitaura nekuti chinhu chimwe chandinoziva ndechekuti ndakaita chaizvo izvozvo pazviitiko zvakawanda.